Tuuryare: Kuwa Shabaab waxa yar ugu shaqeeya waxaan leenahay naftiina lacag ha dhaafsana – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tuuryare: Kuwa Shabaab waxa yar ugu shaqeeya waxaan leenahay naftiina lacag ha dhaafsana
Mareeg.com: Gudoomiyaha Maxkamada sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, Col. C/raxmaan Maxamed Tuuryare ayaa mar kale ku celiyey in lasoo xiri doono waalid kasta ee cunigiisa lagu helo dami la xiriira Shabaabnimo, hadii ussan marka hore soo gudbin warbixintiisa.
Tuuryare ayaa hadalkaan ku celiska ah ka jeediyey goob saaka Muqdisho lagu tooganayey 3 wiil oo maxkamaddu ciidamadu ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii labo ka mid ah lagu helay iney dad dhowr ah dileen, halka kan kalana lagu helay inuu fududeeyey weerarkii Ramadaankii tegay lagu qaaday Villa Somalia.
“Waxaan kusii dhiirgelineynaa ciidamada amaanka ineysan inoo keenin dhallinyaro Shabaab ah oo aan waalidkood lala soo xirin, waalidka waa inuu soo sheego haddii cunugiisu Shabaab noqdo” ayauu yiri Col. Tuuryare.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa sheegay iney ka warhayaan in dhallinyaro badan oo ka tirsan Alshabaab aysan mabda’ ahaan ula jirin ururkaas balse ay uga mid yihiin iney ka helaan dhaqaale yar, islamarkaana qeyb ka qaataan dadka Soomaaliyeed ee la leynayo.
“Waan ognahay dad badan Alshabaab feker ahaan uga tirsanaa ee dhaqaale yar ayaay raadinayaan, marka waxaan leenahay naftiina ha dhaafsana dhaqaale, waa leydin dilayaa haddii gacanta leydinku dhigo” ayauu yiri Tuuryare.
“Dhallinyarada la leeyahay waxaa leydin siinayaan $200 ee dadka Soomaaliyeed soo dila, waxaan leenahay $200 dollar waxaa idin siin karta dowladdiina, ee naftiina lacag yar ha dhaafsana” ayuu sidoo kale yiri Tuuryare.
Maxkamadda ciidamada ayaa dhawaan olole adag ku qaadday Alshabaab, waxaana wiilashii saaka la toogtay mid ka mid ah aabihiis ku xiran Mqudisho, iyadoo lagu hayo baaritaan.
Somalia: Bomb blast killed three women collecting garbage in Mogadishu
Daawo Video: Raashiya oo quursatay gaari gaashaaman oo Taliyaanigu soo saaro